ụlọ ọrụ profaịlụ - Zhongshan Maoshuo Technology Co., Ltd
Anyanwụ ike kit
Solar iju mmiri oriọna
Obere agwa n'okporo ámá oriọna
anyanwụ ụsụ oriọna
anyanwụ peach oriọna ma anyanwụ apple oriọna
anyanwụ ọbọgwụ mmiri oriọna
anyanwụ mgbidi oriọna
Trust ngafe profaịlụ
Zhongshan Mao Shuo Technology Joint-Stock Co., Ltd e hiwere na 2008, suppliers nke ike ngwa usoro. Melite R & D, n'ichepụta, ahịa, ọrụ dị ka otu n'ime na n'èzí ọkụ, anyanwụ photovoltaic ike ọgbọ na ike ọkọnọ nke mba elu-tech ụlọ ọrụ. Ya agafeela "ISO9001: 2008 mba quality management usoro asambodo" na "ISO14001: 2004 mba gburugburu ebe obibi management usoro asambodo.". Merie ndị "mba ọkụ ụlọ ọrụ ama ika", "ama ika China", kemgbe ọtụtụ afọ, gosiri dị ka "nkwekọrịta ma kwesịkwa ntụkwasị obi ume" ndị asọpụrụ aha, nke nwe Maoshuo (Hongkong) Limited ụlọ ọrụ nke sayensị na nkà na ụzụ na ahia (Guangdong) Co., Ltd.
The ụlọ ọrụ lekwasịrị anya ubi nke Ikanam n'èzí ọkụ, anyanwụ photovoltaic ike ọgbọ na ike esenyịn, n'èzí ọkụ ngwaahịa na-agụnye anyanwụ ọkụ, Ikanam ọkụ, ọwara ọkụ, Ngwuputa oriọna, igba ìhè oriọna na ndị ọzọ na ngwaahịa; ịmafe ike esenyịn, mgbe nile voltaji, mgbe nile ugbu a ike ọkọnọ technology bụ ụlọ ọrụ ndú! Products agafeela OA, FCC, CB, CCC na RoHS na ndị ọzọ na anụ ụlọ na mba na asambodo, emewo meriri ọtụtụ mepụtara, na ịba uru na ụdị na-anya nchọpụta Kemịkalụ.
N'èzí ọkụ ngwaahịa na-n'ọtụtụ ebe na ọchịchị ụzọ, ike na-azọpụta ọkụ oru ngo, ọhụrụ ime obodo na-ewu, okporo ụzọ ọkụ oru, odida obodo ọkụ na ndị ọzọ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ike na-azọpụta oru ngo. Na ibido Ikanam ụzọ ọkụ oru, odida obodo ọkụ, anyanwụ photovoltaic ike ọgbọ usoro, ike na nchekwa umu ọrụ na ume management ngwa, oru na mba, na exported ka Southeast Asia, Central Asia, Europe na United States na obodo ndị ọzọ na mpaghara.
"Ịkwọ ụgbọala ụwa na ọkụ na ụwa" bụ a na-eto eto ozi nke ụlọ ọrụ na-ewu anyị nkịtị n'ala nna site na mgbe nile ume technology innovations, ala carbon, ike na-azọpụta, emission Mbelata na adigide mmepe ụdị.
Elekwasị anya na mma ume - Mao Shuo technology!
Ekwentị: +86 18948897199